Maraykanka oo Tarxiilay Sarkaal Qatari ah iyo Xaaskiisa oo adoonsan jiray shaqaalahooda! - iftineducation.com
iftineducation.com – Maxkamada dalka Maraykanka ayaa amartay in dalka laga saaro sarkaal ka tirsan ciidamada Qatar oo kamid ahaa saraakiisha lagu tababarayo wadankaasi, kadib markii uu si xun ulla dhaqmay shaqaalaha guriga uga shaqeyn jiray.
Sarkaalkan oo lagu magacaabo Hassan al-Homoud oo ah 46 sano jir, ayaa u dhashay dalka Qatar. Xaaskiisa ayaa lagu magacaabaa Saynab al-Hosani oo u dhalatay dalka Imaaraatiga. Reerkan ayaa shaqaalahooda kala yimid dibada markii ay usoo wareegeen dalka Maraykanka.
Maxkamada ayaa amartay in Sarkaalkan iyo Xaaskiisa aysan dib danbe ugu soo noqon karin Wadanka Maraykanka, kadib markii lagu helay danbi ah inay gabood falo u geysteen labo haween ah oo gurigooda uga shaqeyn jiray.
Haweenka tacdiga loo geystay oo kasoo kala jeeda dalalka Bangaladhesh iyo Indonesia, ayaa diiday inay maxkamada horteeda markhaati ka noqdaan dhibaatada loo geystay, balse xaakimka Maxkamada ayaa sheegay in cadeynmo ku filan la horkeenay maxkamada.
Shaqaalaha ayaa la sheegay in cunto la´aan lagu dilay, isla markaana telefonada, telefishinka iyo waliba internetka loo diiday, sidoo kale shaqaalahan ayaan lasiin mushaharkooda in mudo ah. Taasi waxaa u dheer hoyga ay seexan jireen oo aan loo dhigin adeega aasaasiga ah.
Garsooraha xukunka ku riday oo lagu magacaabo Orlando Garcia ayaa sheegay inuu doonayey hadii haweenkaasi shaqaalaha ah maxkamada ka hor sheegi lahaayeen dhibaatadooda uu ku xukumi lahaa sarkaalkaasi iyo xaaskiisa xabsi 10 sano ah, balse diidmaha qiraalka shaqaalaha ayuu sheegay inay xabsiga ka badbaadisay sarkaalkan.
Wadamada Carabta ayey inta badan ka dhacdaa in qoysaska Carabta si xun ulla dhaqmaan shaqaalaha ay ka keensadaan dalalka saboolka ah, balse waa markii ugu horeysay oo qoys carab ah danbigan lagu helo iyagoo jooga wadanka Maraykanka isla markaana la tarxiilo.
Dalalka Khaliijka ayey ka dhacaan gabood falada ugu xun xun ee loo geysto shaqaalaha ka yimaada dalalka Aasiya iyo Afrika, waxaana kamid ah in dil, kufsi iyo jirdil loo geysto shaqaalo badan oo ajaanib ah, arrintaasi oo keentay in inta badan wadamada Afrika iyo Aasiya ay xiligan diidaan in ay shaqaalo u diraan dalalka Carabta gaar ahaan Sucuudiga.
Dhacdooyinka ugu yaabka badan ee sanadkii tagay ka dhacay dalka Sucuudiga ayaa waxaa kamid ahaa in nin Sucuudi ah uu Gacanta ka jaray haweenay guriga uga shaqeysa oo lagu magacaabo Kasthuri Munirathinam oo ah haweenay 46 sano jir ah oo u dhalatay dalka India.
Dhacdadan oo xiisad ka dhex dhalisay dalalka India iyo Sucuudiga. Haweenaydan ayaa sababta gacanta looga jaray ay ahayd kadib markii ay ninka ay u shaqeyso uga cabatay xaalada nolosheeda oo kaliya.
Shaqaalaha ajaanibta ah ee ka shaqeeya dalalka Carabta sida Sucuudiga ayaan heysan wax awood ah oo ay isaga difaacaan dadka ay u shaqeeyaan maadaama laga qaado baasabooradooda marka ay tagaan dalkaasi, isla markaana kala bar lacagta mushaharkooda ay qaataan kooxaha ka ganacsada shaqaalaha la geeyo wadankaasi.
Dalka Ugandha ayaa bishii lasoo dhaafay ee Janaayo 2016 sheegay inuu joojiyey shaqaalihii loo diri jiray dalka Sucuudiga, kadib markii ay soo baxeen gabood-falo badan oo loo geystay haweenka u dhashay Ugandha oo dalkaasi loo geeyey inay ka shaqeeyaan guryaha. Sidoo kale Kenya iyo Itoobiya ayaa joojiyey shaqaalihii ay u diri jireen Sucuudiga.
Balse Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay wadanka Sucuudiga u diri doonto shaqaalo haween ah oo gaaraya 50.000 oo gabdho ah, mashruucaasi uu hindisaheeda lahaa safiirka cusub ee Madaxweyne Xassan Shiikh dhawaan u magacaabay dalka Boqortooyada Sucuudiga, waxaana dhamaadkii sanadkii tagay magaalada Muqdisho laga furay xafiis qaabilsan haweenkaasi la doonayo in loo diro dalka Sucuudiga.
Qofkii saddexaad dhalinyaro Soomaali ah oo sanadkan lagu dilay magaalada Toronto